Ekupholiseni Ibhasi, Umqeqeshi, Ibhasi lesikole ne-Articulated Bus ifektri nabakhiqizi | SONGZ
Isilawuli-moya Sebhasi, Umqeqeshi, Ibhasi Lesikole Nebhasi Elishiwoyo
Uchungechunge lwe-SZR, Ibhasi eliphakathi nendawo ukuya phezulu, leBhasi le-8.5-12.9m, iTopper Tube Aluminium Fin Condenser.
I-SZR-IV ne-SZR-IVF-D ne-SZR-VD
Uchungechunge lwe-SZR luhlobo lwophahla oluhlukanisiwe oluphezulu lwe-air conditioner ye-8.5m kuya ku-12.9m kusuka phakathi kuya phezulu kuya ekugcineni kwebhasi elijwayelekile, umqeqeshi, ibhasi lesikole noma ibhasi elihlanganisiwe. Amandla okupholisa we-air conditioner yochungechunge lwamabhasi asukela ku-20kW kuye ku-40kW, (62840 kuya ku-136480 Btu / h noma ngo-17200 kuya ku-34400 Kcal / h). Ngokuqondene ne-air conditioner yetekisi noma ibhasi engaphansi kuka-8.5m, sicela ubheke uchungechunge lwe-SZG. Noma ungaxhumana nathi ku- sales@shsongz.cn ukuthola eminye imininingwane.
Ukucaciswa kobuchwepheshe bebhasi A / C SZR Series:
I-SZR-II / FD
22 kW noma
24 kW noma
28 kW noma
30 kW noma
(Igumbi le-Evaporator 40 ° C / 45% RH / Igumbi le-Condenser 30 ° C)
26 kW noma
33 kW noma
Kunconywe Ubude Bebhasi
Kusebenza kusimo sezulu saseChina）
Ivolumu Yokugeleza Komoya
I-56 A (24V)
31 kW noma
37 kW noma
34 kW noma
36 kW noma
40 kW noma
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZR-IIF-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZR-III-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZR-IV-D
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZR-IVF-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZR-VD Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZR-VF-D
Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZR-VI-D Imininingwane Yezobuchwepheshe ye-SZR-VIF-D
1. Lonke uhlelo lubandakanya uphahla iyunithi, i-grille yokubuyisa umoya, icompressor, nezinsiza zokufaka, akubandakanyi ubakaki be-compressor, amabhande, i-refrigerant.
2. Isiqandisi ngu-R134a.
3. Ukushisa umsebenzi, nokunye okuhlukile kuyakhethwa.
4. ICompressor BOCK, VALEO noma i-AOKE ingakhethwa.
5. I-fan & blower njengenketho efana ne-brush noma i-brushless.
6. Sicela uxhumane nathi ku- sales@shsongz.cn ukuthola ezinye izinketho nemininingwane.
Isendlalelo se-R & D SZR Series:
Ama-air conditioner ochungechunge e-SZR akhiqizwa ukuhlangabezana nezidingo zokubukeka ezikhulayo zama-air conditioners embonini yebhasi. Ukuze kuzuzwe ukubukeka okuhle kakhulu, ama-air conditioners ochungechunge lwe-SZR asebenzisa inhlanganisela yekhava le-SMC elibunjiwe ne-aluminium alloy.
Ixazulula ngempumelelo inkinga yokungabonakali kahle kwengilazi yendabuko edwetshwe ngesandla yengilazi yophahla lweplastiki lohlelo lokupholisa umoya webhasi. Ngasikhathi sinye, ithuthukise ngokujulile uhlelo nesakhiwo, kucatshangelwa ukuthambekela kokuthuthuka kokusebenza kahle okukhulu nesisindo esincane.
Ukwethulwa Okuningiliziwe Kwezobuchwepheshe kweSZR Series Bus Air Conditioner
1. Ikhava ye-AC: tumboza usebenzisa indlela ye-SMC ne-aluminium alloy.
Uma kuqhathaniswa nesembozo esiphezulu sendabuko esenziwe ngesandla se-FRP, ikhwalithi yokubukeka ithuthuka kakhulu, isilinganiso sosuku sosuku sithuthukiswa kakhulu. Kusebenza ezokuthutha zomphakathi eziphakathi nendawo eziphakeme kanye namabhasi ezivakashi.
Sicela uphendukele ku-SUPPRT-FAQ, ukuze wazi kabanzi ngomehluko phakathi kwe-SMC nesembozo sengilazi yefayibha.
Ukubukeka kwe-AC: Izacile futhi lula umumo
Ukubukeka kwe-SZR yochungechunge lwamabhasi we-AC kuhlehlisiwe, ngokubukeka okuhle nokuklanywa okuncane. Ubukhulu be-air conditioner ngu-188mm, okungaphansi kobukhulu bama-air conditioner amanje ajwayelekile.
Ubukhulu obuncane 188mm
Ukwakheka kwe-AC: Isakhiwo esilula
Isisekelo se-condenser sisebenzisa ifreyimu emise okwenziwe nge-V ngaphandle kwesakhiwo segobolondo phansi, ugongolo ohlangothini alula futhi lwenziwe kahle, futhi umgodi womoya womhlangano we-evaporator usebenzisa isakhiwo esisha sokugoba esigobolondo. Ngalezi zindlela ezingenhla, isisindo sesifutho somoya sincishisiwe kakhulu.
Uhlaka olumiswe njengo-V
I-Integrated Bending Air Duct
Isakhiwo se-Lightweight Side Beam
Isakhiwo se-AC: Isevisi Nokunakekelwa Kwezobungane
Ikhava ephezulu ye-SZR yochungechunge lwe-air conditioner isebenzisa isakhiwo sokuxhumeka kwe-hinge, futhi ipuleti lekhava akudingeki lisuswe lapho kulayishwa imoto, esindisa kakhulu isikhathi sokufaka. Isiphephethafutho esifingqayo sifakwe ngenhla, futhi ikhava ayidingi ukuvulwa lapho kufakwa isithwebuli se-condensing, nefeni elihwamukayo ligcinwa ngesikhathi sokulungiswa. Ngasikhathi sinye, kunesidingo sokuvula ingxenye yekhava eseceleni, okulula ukuyilungisa ngemuva kokuthengisa.
Isakhiwo seminyango ye-Evaporator
Isilawuli se-Condenser nesakhiwo sehinji
Ukusebenza kwe-AC: I-condenser esebenza kahle kakhulu
I-SZR yochungechunge lwama-air conditioners aklanyelwe ngokuya ngesakhiwo samabhodlela omoya we-bus, ahlanganiswe nokulingiswa kwe-CFD futhi asuselwa kwimiphumela yangempela yokuhlaziywa, ukwenza ngcono ukugeleza kwe-condenser, futhi wamukele ukwakheka okuhle kokugeleza okungalingani ukufeza okuphezulu ukusebenza kahle komshini wokushisa ukushintshisana ngokushisa.
Ukuhlaziywa kweCFD kwejubane lomoya lokushisa okushisa
Ukusebenza kwe-AC: Umklamo womhlahlandlela womoya oyingqayizivele
I-SZR yochungechunge lwe-air conditioning condenser yakhelwe nge-condenser fan air guide hood. Isikhombi somoya sisebenzisa i-Archimedes spiral principle kanye nesakhiwo esiyindilinga esiyindilinga sokukhulisa inhlangano yokuhamba komoya nokuqeda ukushisa okuvamile ngaphandle komhlahlandlela womoya. Inkinga yokubuyiswa komoya ithuthukisa kakhulu umphumela wokushintshanisa ukushisa kwe-air conditioner.
I-hood fan eguquguqukayo ehlukile
Ngokuhlaziywa kokulingiswa nokuhlolwa kokuhlola, inhlangano yokugeleza komoya inengqondo kakhulu lapho kufakwa i-deflector yomoya. Ngaphandle kwendwangu. Ukuhamba komoya kuphuma kuhlakazekile, futhi isimangaliso se-backflow sicace bha.
Ukuhlaziywa kokuhamba komoya ngaphandle komoya nomoya ogeleza ngehood yomoya
7.Ukusebenza kwe-AC: Ivolumu yokushaja yesiqandisisi encane
Uma kuqhathaniswa nendabuko conditioner air conditioner, SZR uchungechunge usebenzisa ubuhle ukushisa design kanye nomklamo ubuhle izisetshenziswa piping yangaphakathi. Nciphisa ukukhokhiswa kwesiqandisi ngama-30%. Ngaleyo ndlela kuncishiswe umthelela wokuvuza kwesiqandisi emvelweni.
I-SZQ Series Bus AC Functions Thuthukisa, Ongakukhetha）
1. Isikhuhluzi nomoya opholile ekamelweni likaDriver
I-defroster, ne-AC egumbini lomshayeli zingafakwa ngokuya ngemfuneko yekhasimende, ukuhlinzeka ngemvelo entofontofo yomshayeli.
2. Ubuchwepheshe obuphakathi bokulawula obuphakathi
Ukuhlanganiswa kwephaneli yokulawula kanye nokusetshenziswa kwemoto kulungele ukwakheka okumaphakathi kokulawulwa kwezimoto. Umsebenzi wesilawuli kude wokulawulwa komkhiqizo uyengezwa ukwenza lula ukuphathwa kokusebenza kwamakhasimende.
3. Ubuchwepheshe bamapayipi nokushisa
Ipayipi lokufudumeza amanzi lingakhishwa lisuke phakathi komgogodla we-evaporator ukuze libone ukusebenza kokushisa kwesifutho somoya futhi lihlangabezane nezidingo zokushisa okuncane ebhasini endaweni ebandayo.
4. Ubuchwepheshe bokuhlanzwa komoya
Kufaka phakathi imisebenzi emine: ukuqoqwa kothuli kwe-electrostatic, ukukhanya kwe-ultraviolet, i-generator enamandla ye-ion, kanye ne-photocatalyst filtration, engathola isikhathi esigcwele, i-anti-virus enganqamuki kanye nokuvala inzalo, ukususwa kwephunga nokususwa kothuli okusebenzayo, ukuvimba ngempumelelo indlela yokudlulisela igciwane.
5. Isilawuli kude ukuxilongwa ubuchwepheshe
Umsebenzi we "Cloud control", qaphela ukulawulwa okukude nokuxilongwa, futhi uthuthukise insizakalo yomkhiqizo namakhono wokuqapha ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza olukhulu lwedatha.
6. Ubuchwepheshe Bokulawulwa Kwezamandla
Ngokuya ngezinga lokushisa ebhasini nasemvelweni, ukugeleza kwesiphepheli necompressor kuyalungiswa ngezigaba eziningi ukunciphisa ukuqala nokuma kwecompressor, ukuthuthukisa ukunethezeka kwabagibeli, nokuqinisekisa ukuthi uhlelo lusebenza kahle .
Ukusetshenziswa kwe-SZR Series Bus AC:
Ngokuthuthuka kwemakethe nokwenza ngcono amazinga empilo, ibhasi lenyuke kancane kancane lisuka ezindleleni ezilula zokuhamba laya ekunakeni kakhulu ukuthuthuka kwemvelo yezokuthutha. Ngakho-ke, abagibeli abasezingeni eliphezulu bebelokhu benyuka unyaka nonyaka eminyakeni yamuva. I-SZR igxile ekubukekeni futhi ilungele amabhasi aphezulu naphakathi kwebanga. Umbono wemakethe muhle.
1. The anhlobonhlobo kwesicelo
I-arc engezansi yochungechunge lwe-SZR ifanele ama-arcs ophahleni anendawo engamamitha ayi-6 ~ 72, ububanzi beyunithi ngu-1860mm, futhi indawo yokungenisa umoya ifakwa ngqo emapayipi omoya ezinhlangothini zombili zebhasi, okulula ukuyifaka . Uchungechunge lomkhiqizo lunamamodeli ayi-8 kusuka kokuncane kuya kokukhulu, futhi amandla okupholisa angama-20 ~ 40KW, afanele amabhasi angama-8 ~ 13 amamitha.
5. Ubuchwepheshe Bokulawulwa Kwezamandla
Vumelana nobubanzi obuningi bokugoba kophahla
2. Izinketho zokumiswa okucebile
Uchungechunge lwe-SZR lucebile ekulungiseleleni kwamaqembu abasebenzisi ahlukahlukene, futhi kunokulungiswa okuningi kwabasebenzisi okufanele bakhethe.
Ukucushwa okuphezulu: ikakhulukazi ukucushwa kokungenisa kwezokuthutha zomphakathi namabhasi ezivakashi aphezulu, abalandeli nezinye izesekeli
Ukumiswa Kwezomnotho: Kubhekiswe kakhulu ekuhlelweni kwamabhasi ezomnotho, amabhasi ezivakashi, abalandeli nezinye izinsiza.
3. Amacala Okusebenzisa woChungechunge lwe-Bus Air Conditioner SZR:
I-Ankai (JAC) 600 Ibhasi efakwe ne-SONGZ air conditioner eRiyadh (Saudi Arabia)
I-Ankai (JAC) 3,000 Ibhasi efakwe ne-SONGZ air conditioner eRiyadh (Saudi Arabia)
I-Foton 1,000 Bus efakwe ne-SONGZ air conditioner eNaypyidaw (Myanmar)
Langaphambilini Isiphephetha-moya seMini neMidi City Bus noma iTourist Bus
Olandelayo: Umnotho Womoya Womoya Webhasi, Umqeqeshi, Ibhasi Lesikole kanye Nebhasi Elichaziwe
i-air conditioner yekhumbi
isibuyisi-moya esifakwe emuva
Ibhasi A / C.
I-Conditioner Yebhasi Yebhasi Le-Double Decker
I-Double Decker Bus A / C
Isipholisi se-Double Decker sebhasi
Umnotho Ekupholiseni Ibhasi, Umqeqeshi, Isikole ...
Ekupholiseni iMini neMidi City Bus noma iT ...